Tongava vaovao FiduLink International Network Francaisee!
TOROHEVITRA FAMPISORIANA AN-TRANO FISORIANA FISEHOANA
AZO MISAO FISAN-KEVITRA MANGALAZA
Midira ivon-orinasa mpiara-miasa ao amin'ny FIDULINK dia ny fahazoana fangatahana serivisy sy baiko mivantana avy amin'ny sehatra FIDULINK. Mahazoa baiko, fangatahana, famandrihana ary maro hafa.
Ka lasa ivon-toeram-pivarotana FIDULINK dia mahazo fangatahana amin'ny kitapo vitsivitsy. Fisoratana anarana maimaim-poana mandritra ny minitra 5. Fiofanana momba ny sata kalitao, serivisy, fahaiza-manao amin'ny FIDULINK atolotra (ity dingana ity dia mitaky ny 45 minitra).
MISY FIDIANA FAHADIOVANA FIDULINK?
Ivon-toeram-piasana na tompona trano dia mila miditra ao amin'ny FIDU fotsiny ianaoLINK
Fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny ivon-orinasao eo amin'ny vavahady FIDULINK, mandray ny karamanao isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny fandefasana banky.
Hanara-maso ny raharaham-barotra sy ny lahatahiry avy amin'ny habaka MY OFFICE , fitaovana tena ilaina hanatanterahana ny iraka ataonao ho ivon-toeram-pivarotana mandeha ho azy ary koa ny serivisy rehetra misy.
NY FIKOROHANA + KIT BUSINESS CENTER
Tonga ivontoerana orinasa FIDULINK Midika izany fa miditra amin'ny vavahady manerantany amin'ny serivisy sy fitaovana fitantanana an-tserasera. Miaraka amin'ny fisian'ny firenena maherin'ny 150 manerantany MY OFFICE dia manolotra anao fahafahana mandray ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.